octobre 2015 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
« MPANELANELANA SY MPANASITRANA MAHAY MIANTRA I JESOA KRISTY”
Jesoa miakatra any Jerosalema, any Jerikao izay tanàna lalovana raha ho any, ary inty fahagaganana fanasitranana nataon’i Jesoa an’IBartiméinty no fahagagana farany nataon’I Jesoa mialoha ny nijaliany sy ny nahafatesany. Ka tsara ihany raha fantatsika ny fizotran’ny tantara.
Tamin’ny heriny isika dia nandre an’I Jesoa eny an-dalana miaraka amin’ireo mpianany: niady hevitra ny mpianatra eny an-dalana ka nanontany an’I Jesoa ny farany ho eo an-kaviany iray ary eo an-kavanana ny iray. Raha araka ny jeografia dia I Jerikao no toerana farany iva indrindra eto amin’izao tontolo izao ka rehefa miala ao dia tsy maintsy miaka-piakarana. Io no vohitra farany lalovana raha ho any Jerosalema. Ary fantatsika koa mikasika an’I Jerikao rehefa hiditra ny tany nampanantenaina ny vahoakan’Israely dia tsy maintsy nandalo ny onin’I Jordana dia miditra ny tanànan’I Jerikao izay tanànan’i manda, efa natolotr’Andriamanitra ny vahoakany ny tanànan’I Jerikao ka rehefa niodina im-pito io tanàna io ny vahoakaka nirodana ny manda tamin’ny fiodinana fahafito farany. Ny teny hoe Jerikao dia avy amin’ny teny Hebrio izay midika ho tanànan’ny volana, satria ny olona tao dia nanompo ary nivavaka tamin’ny volana.
Continuer la lecture Alahady 25/10/2015 : Toriteny
Alahady 25/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (Jer 31, 7-9)
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 5, 1-6 )
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 10, 46-52)
Continuer la lecture Alahady 25/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Continuer la lecture Alahady 18/10/2015 : Toriteny
Alahady 18/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 53, 10-11)
Rehefa nanatitra sorom-pifonana ho an’ny fanahiny izy, dia hahita taranaka, ho lava andro iainana.
Sitraky ny Tompo ny nanorotoro ny Mpanompony tamin’ny fijaliana, nefa rehefa voaatitry ny fanahiny ny sorom-panorenana, dia hahita taranaka izy, ho lava andro iainana, ary hambinina eo an-tanany ny hevitra nokasain’ny Tompo. Noho ny fijalian’ny fanahiny, dia nahita izy, ka ho afa-po. Ilay marina, Mpanompoko, noho ny fijaliany, hanamarina olona betsaka, ary ny tenany hivesatra ny helok’ireo.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 4, 14-16 )
Ry kristianina havana, manana Mpisorona lehibe isika izay lasa namaky ny lanitra, dia i Jesoa Zanak’Andriamanitra, koa aoka hotanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria tsy Mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika; fa efa nalaim-panahy tahaka antsika tamin’ny zavatra rehetra Izy, afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika hanatona ny fiketrahan’ny fahasoavana amim-pahatokiana, mba hahazoantsika famindram-po, sy hahitantsika fahasoavana ary hamonjena antsika amin’ny andro hilàntsika izany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 10, 35-45)
Tonga ny Zanak’Olona mba hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.
Continuer la lecture Alahady 18/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Ny Chapelle d'adoration Perpétuelle ao amin'ny Ecar Sainte Anne Anjomakely. Loharanom-pahasoavana, toerana masina afaka handihan-tena, hiresahana manokana amin'ny Ray Tsitoha fa indrindra fitsahona masina. Tongava mandalo na dia 5 minitra…
Continuer la lecture Chapelle d’adoration Perpetuelle